Izindaba - Izici zokonga ugesi kanye nezemvelo ezinobungani bemvelo
Isikhuni se-lime esime mpo sisho ithuluzi lokubala i-lime ukukhipha i-clinker ngokuqhubekayo engxenyeni engezansi yokuphakela okuphezulu. Inomzimba womlilo ovundlile, ungeza futhi udedele idivayisi nemishini yokungenisa umoya. isikhunta esime mpo singahlukaniswa sibe yizinhlobo ezine ezilandelayo ngokusho kukaphethiloli: kuhhavini we-coke oven mpo, kuhhavini omile mpo, uphethiloli omile mpo kanye nomlilo oqondile. Inzuzo yethanga le-lime elibheke phezulu ukuthi ukutshalwa kwemali okuncane, indawo ephansi, ukusebenza kahle okukhulu, ukusetshenziswa okuphansi kukaphethiloli nokusebenza okulula.
Umcako odonswa ngomlilo osindisa amandla nokonga imvelo awugcini nje ngekhwalithi ephezulu, kepha futhi iyunifomu futhi izinzile, inomsebenzi ophakeme we-lime nokuqukethwe okuhle kwe-calcium. Namuhla sizofunda ngezici zekhonti yokonga i-lime nokonga imvelo.
I-1) Ngoba impahla iqhubekela phambili ngokufanayo endaweni yeziko le-lime, iphezulu futhi isesimweni esihle sokusebenza, okunikeza isiqinisekiso samabhizinisi afana nesitshalo sensimbi ukwandisa isikali nokunciphisa izindleko zokukhiqiza.
2) Izinga eliphakeme lokuzenzekelayo, uhlelo lokulawula okukude, bambalwa abantu abangaqhuba wonke umugqa.
3) Uniform izinga lomkhiqizo.
I-4) I-lime lime kuhhavini ukubala okuvulekile, inqubo yokukhiqiza ephezulu, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi uma kuqhathaniswa nesistimu yakudala yesikebhe sesitayela, futhi ingasebenzisa imfucumfucu yesithando somlilo njengophethiloli ovikela kakhulu imvelo.
5) Uhlelo oluzenzakalelayo nolwezandla zombili zihlonyisiwe. Ngaphandle kokusebenza okwenziwa ngesandla kwebhokisi lokusebenza lesayithi, zonke zingalawulwa ngokusebenza kwekhompyutha egumbini lokulawula eliphakathi.
6) Idatha yazo zonke izinsimbi (njengegeji yengcindezi, imitha yokugeleza, ithuluzi lokushisa) ibonakala kukhompyutha futhi ingaphrintwa yiphrinta.
7) Qedela i-Siemens ehlakaniphile enesisindo se-module batching, isisindo nesistimu yesinxephezelo.
8) Izinga lezinga lezinto ezibonakalayo ezithembekile zelime, amakhosi ahlakaniphile neminye imishini yokuphathelene.
9) Uhlelo oluzenzakalelayo nolwezandla zombili zihlonyisiwe. Ngaphandle kokusebenza okwenziwa ngesandla kwebhokisi lokusebenza lesayithi, zonke zingalawulwa ngokusebenza kwekhompyutha egumbini lokulawula eliphakathi.
Isikhathi Iposi: May-25-2020
Ukwenza I-calcium Hydroxide, Calcium oxide Futhi Calcium Hydroxide, Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide, Ukwenza i-Calcium Hydroxide, Igama Lwebhizinisi LeCalcium oxide, Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide Production Line,